Isamsung yaphula ingxelo yayo yekota yesithathu yengeniso | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Isamsung ibuyela kwindlela yeerekhodi zenzuzo
I-Samsung Electronics ikwazile ukubetha irekhodi layo Ingeniso ephezulu kwikota. Oko kukuthi, inkampani ephethe i-Galaxy Note 9 kunye ne-Galaxy S9, enkosi kuthengiso lolunye uthotho lweemveliso, likwazile ukuqokelela isixa se-15.500 yezigidi zeedola.
Sithetha ngesixa esidlulileyo I-12% kwinto efunyenwe ekuqaleni konyaka. Siyazi ukuba ukuthengiswa kweGalaxy S9 akuphumelelanga ngokwenyani, kodwa konke oko kungenxa yokuthengiswa kwezikrini kunye nememori. Ndifuna ukwazi ukuba iApple kutshanje ibhengeze ukuba iza kujonga omnye umenzi wescreen ...
Kuzo i-15.500 yezigidigidi zeedola kwizibonelelo, zizonke zizonke $ 57.500 yezigidigidi kwingeniso kwikota yesithathu ka-2018. Ngaphandle kokunyuka kwepesenti ezili-12 xa kuthelekiswa nekota yokuqala, ifumene ukonyuka ngama-20% ngonyaka.
Samsung khange anike zinkcukacha ngentsebenzo kububanzi bamashishini abo de ibe iyakhutshwa ingeniso iyonke, ke kuyakufuneka silinde ukufumanisa ngcono ukuba sisiphi isiseko solo nyuso lukhangeleka lukwazile ukophula iirekhodi zalo zenzuzo.
Njengoko besesitshilo, bangabo iinkumbulo kunye nezikrini Abathathi-nxaxheba abaphambili kolu nyuso, ngelixa i-Galaxy S9 ibingeyiyo ifowuni ekhokelele kwintengiso emininzi, ngakumbi xa kulindelwe utshintsho olukhulu kwi-Samsung Galaxy S10 eza kuqaliswa ekuqaleni kwe-2019.
Nokuba yeyiphi na, inkampani yaseKoreaa ikwimo entle ngenzuzo yokurekhoda kunye nekamva eliqaqambileyo ngaphambili nezisombululo zalo ezahlukeneyo. Kwaye zizikrini, ezo ziphethe iimodeli ezimbini ze-iPhone, ezongeze kwinto yokuba inkampani yaseKorea inokufumana ingeniso engaka.
Ngoku kufuneka sazi Silindeleni ngeGPS S10 ngubani na oya kuba nathi ngexesha elifutshane, kwaye ngakumbi ukuba kunokwenzeka ngoku kuvuza okutsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung ibuyela kwindlela yeerekhodi zenzuzo
Yoyisa ubumelwane bakho okanye idolophu yakho nge-Run An Empire ngaphambi kwabanye
[APK] Ungawusebenzisa njani umxholo omnyama kwiindaba zikaGoogle, usetyenziso lweendaba lweG enkulu